Maqnaanshahaaga SEO ma noqon karaa koronto-dhaliye?
Qeybta muhiimka ah ee ololaha suuq-geynta ee internetka waa mid ku haboon oo tayo sare leh oo SEO ah oo laga helo ilo macquul ah. Waxay noqon kartaa wax aad u adag oo loogu talagalay shabakadaha dhowaan la sameeyay ee isku xira xiriirinta goobaha PR ee sarreeya ama abuuraya isku xirnaanta joornaal caan ah. Si kastaba ha noqotee, maaha wax sabab u ah rajada. Xitaa qaar ka mid ah suuqyadii hore waxay dhibaato ka qabaan helitaanka dib u wanaagsan. Taasina waa sababta dhaliyeyaasha loo yaqaan "backlink generators" loo abuuray si loo fududeeyo geeddi-socodka helitaanka isku-xirnaanta tayada.
Istaraatiijiyada SEO waa wax aan faa'iido lahayn haddii maadigaagu uusan si fiican u qabsan internetka. In ka badan 80% guulahaaga istaraatiijiga SEO wuxuu ku xiran yahay waxyaabaha aad daabacan tahay waana sababta ay muhiim u tahay inaad si gaar ah u fiirsato tayadaada iyo tayadaada.
Sidaa darteed, haddii maadadaada u adeegto sida koronto-dhaliye, qodobkan ayaa kuu noqon doona mid waxtar leh. Aan ka falanqayno farsamooyinka naqshadeynta farsamooyinka farsamooyinka ah ee ku kordhinaya ololahaaga dhismahaaga. Farsamooyinka farsamada casriga ee SEO
Abuuri maaddo qabow, siinta akhristayaashaada wax cusub
Sababta Ka warhaynta isticmaalka macmiilka waxaad ku sharaxi kartaa dafidnimo oo ma aha midda qoraalkaaga. Markaad samaynayso cilmi-baaris suuqa, waxaad u badan tahay inaad akhrisato qoraalladaada tartanka ah ee keena saamiyo iyo maqaalo badan. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer ma ahan fikrad wanaagsan oo keliya oo ku qor mawduuc si aad u noqotid dhaliyaha gadaashiisa sida websaydhyada kale ay u badan tahay inay isku mid yihiin isla markaana mawduuc gaar ah horay u gaartay xuduudaheeda. Taasi waa sababta aan si xoog leh kugula talineyno inaadan ku qorin mowduucyo isku mid ah sida tartamayaashaadu sameeyaan. Taa bedelkeeda, waxaad la soo baxdaa fikrado cusub oo cusub oo hal abuur ah oo noqon kara mid muhiim u ah akhristayaashaada. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad iska ilaaliso is-daba-gelinta mawduucaaga sida ay u egtahay mid aan caadi ahayn oo aan kor u qaadeynin isticmaalaha dhinacaaga.
Maalmahan, darajooyinka Google waxay ku tiirsan yihiin tayada dhabarka halkii ay ka tiri lahaayeen tirada. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad raadsato fursadaha dhismaha xiriirinta laga helo ilaha webka ee sare. Cilmi-baarista cinwaanada ugu sareeya ee domainka ee aad jeclaan lahayd in aad ka dhigto bangiga laga soocay laga yaabo inay ku siin karaan fikrado cusub oo cusub oo ku habboon.
U diyaari dhagaystayaasha aad ku beegsaneyso
Si aad u isticmaasho nuxur ahaan adoo ah dhaliyaha gadaal-gadaal ah, waxaad u baahan tahay inaad racfaan ka qaadato dhagaystayaasha. Haddii aad ku qorto mawduucaaga macaamiisha maanka ku haysa, waxaad u siineysaa ilaha kale ee shabakada ee rafcaan u ah dhagaystayaasha la beegsan sida adiga. Si aad u fahamto in maaddadaada ay dhegeysto dhegeystayaashaada ama aadan ahayn, waxaad u baahan tahay inaad sameysid falanqeyn faahfaahsan oo suuq-gare ah iyo cilmi-baaris baahidaada macquul ah ee macmiilka.
Waxa kale oo aad dib u qiimeyn kartaa ujeedada isticmaale ahaan adigoo qoraya maktabada ku salaysan habab cusub oo habboon oo raadin ah sida akhristayaasha maanta ah waxay waydiin karaan su'aalo dheeraad ah. Hubi inaad ka jawaabeyso su'aalaha saxda ah ee ku hareeraya erey kasta oo muhiim ah si aad uhesho.
Si aad u hagaajisid booska boggaaga, waxaad ka dhigi kartaa sharaxaaga SERP aad u habboon. Xirmada SERP ee hordhacu waxay kordhin kartaa tirada gujisyada iyo u gudub boggaaga bogga natiijada raadinta. Xitaa haddii qashin aan si fiican loo fiicneyn si toos ah saameyn ugu yeelan mawqifkaaga goobta SERP, waxay u adeegi doonaan sida muuqaalka faa'iido leh ee ku jira mawduucaaga labadaba baarayaasha iyo kuwa isticmaala labadaba Source .